Kenya:Duullimaadyada waa la hakiyey, baararka waa la xiray dagaalka ka dhanka ah coronavirus | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Kenya:Duullimaadyada waa la hakiyey, baararka waa la xiray dagaalka ka dhanka ah...
Kenya:Duullimaadyada waa la hakiyey, baararka waa la xiray dagaalka ka dhanka ah coronavirus
Maaddaama Kiisaska Covid-19 ay gaareen dalka Kenya 15, dawladda ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka Coronavirus ee caalamka dhibaata ku haaya.
Xoghayaha Golaha Caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe ayaa sheegay in dhammaan duullimaadyada caalamiga ah la xayirayo Arbacada, marka laga reebo duullimaadyada xamuulka ee ay waajibka tahay in ay raacaan sharciyo adag ee Dowladdu dajisay.
“Kuwa imanaya dalka inta u dhexeysa hadda ilaa arbacada waxa ay gali doonaan karaantiil khasab ah,” ayuu yiri.
Wasaarada Caafimaadka Kenya waxa ay intaasi ku dartay in wadamada Doonaya in ay muwaadiniintooda kala baxaan dalkaasi ay marayaan shuruudo ay u dajisay Dowladda Kenya,halka Muwaadiniinta Kenyaanka ah la amray in ay u hoggaansamaan sharciyadaan.
Kiisaska la Xajiiyay gudaha Kenya.
Wasiirka Caafimaadka ee dalkaasi, Muthai Kagwe ayaa sheegay in 8 qof laga helay Caabuqaasi, kuwaasi oo isugu jira Kenyaan iyo Muwaadiniin Shisheeye ah.
Wasiirka waxa uu hadalkaasi ka sheegay Shirkiisa Jaraa’id ee Maalinlaha ah, wuxuuna xusay in dhamaan 8-da qof ee laga helay Caabuqaasi ay yihiin dad dibedaha ka yimid, kuwaasi oo bishan Maarso 14-dii ilaa 17-dii ka soo degay Garoonka Caalamiga ee Diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Nairobi.
Mar uu ka hadlayey Bukaanadda cusub dalalka ay ka soo kala jeedaan waxa uu tilmaamay inay 5 qof Kenyan yihiin, 2 u dhalatay Faransiiska iyo qof ka soo jeeda dalka Meksiko. Waxa uu intaasi ku daray in mid ka mid ah Bukaanadda u dhashay Faransiiska aysan xaalladiisa deganayn, sababo la xiriira da’diisa, iyadoo la dhigay Isbitaal ku yaalla Nairobi.
Wasiirka Caafimaadka ee dalkaasi, Muthai Kagwe waxa kale uu qiray inay ku raad-joogaan 363 Rakaab, kuwaasi oo xiriir la yeeshay 8-da qof ee laga helay xanuunkaasi.
Previous articleDowlad Goboleedka Galmudug oo soo bandhigtay Naqshadda dhismaha Dekedda Hobyo.
Next articleCoronavirus:UAE waxa ay joojisay duulimaadyadii, Sacuudiga waxa ay soo rogtay bandoow.
Maamulka maaliyadda Dowlada Federaalka Somalia oo Halis ku soo socota
26-ruux oo ku geeriyootay Doon kula rogmatay Harada u dhaxeysa Uganda & DRC.
Dalalkii ugu horeeyey Qaarada Afrika oo bilaabaya tijaabada talaalka Coronavirus
Puntland oo ka digtay arrin ay DF ka damacsan tahay doorashada 2020/2021-ka
DAAWO:Xil Cosoble”Farmaajo iyo Kheyre waxa ku heshiyeen in la Ugaarsado dadka siyaasada Oga soo horjeydo waxaa kamid ah
Akhriso: Qoor Qoor & Lafta-gareen oo Muqdisho isaga tegay & Ujeedka
Daawo Muuqaal Toos ah Qaabka uu u dhacay Qaraxa Adis ababa & Sida loo bad-baadiyay R/W Abiy Ahmed…